गुणस्तरका हिसाबले कुनै गुनासो सुन्नु परेको छैन | AutoExpress
गुणस्तरका हिसाबले कुनै गुनासो सुन्नु परेको छैन
आरएसके ट्रेड कन्सर्न २०६४ देखी नेपाली बजारमा कारोबार गरिरहेको कम्पनी हो । शुरुवातकै दिनबाट हामीले चीनमा निर्मित उच्च गुणस्तरीय र जेन्युन स्पेयर पार्टस्को आयात गरिरहेका छौं । चीनमा उत्पादनका सामान गुणस्तरीय हुँदैनन, लामो समय टिक्दैनन् भन्ने गुनासो छ । तर, हामीले भित्र्याएका सामान जेन्युन छन् भन्ने कुरा धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गरेर नै सिद्ध भइसकेको छ ।
आरएसके ट्रेड कन्सर्नका बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न ।
आरएसके ट्रेड कन्सर्न २०६४ देखी नेपाली बजारमा कारोबार गरिरहेको कम्पनी हो । शुरुवातकै दिनबाट हामीले चीनमा निर्मित उच्च गुणस्तरीय र जेन्युन स्पेयर पार्टस्को आयात गरिरहेका छौं । चीनमा उत्पादनका सामान गुणस्तरीय हुँदैनन, लामो समय टिक्दैनन् भन्ने गुनासो छ । तर, हामीले भित्र्याएका सामान जेन्युन छन् भन्ने कुरा धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गरेर नै सिद्ध भइसकेको छ । हामीले शुरुवातका दिनबाटै एचवाइबीएमआर, एचवाइबीएमएफ, एचवाइबीएसएस, एक्सजिबी, एनएसटी, केयरवे, एफएलआईलगायत ब्राण्डका स्पेयर पार्टस्का चीनको पहिलो नम्बरमा गणना हुने ब्राण्डेड स्पेयर पार्टस् हुन्, त्यसैले गुणस्तरमा कुनै कमी छैन भनेर बजारलाई निर्धक्क हुन आग्रह गरिरहेका छौं ।शुरुका दिनमा हामीले भारतबाट स्पेयर पार्टस् आयात गर्ने योजना बनाएका थियौं, त्यहाँका केही कम्पनीसँग कुरा पनि भयो तर भारतीय कम्पनी र हाम्रो काम गर्ने सोच मिल्न सकेन । त्यसपछि चीनिया कम्पनीसँग एक–दुई पटक गरेको छलफलपछि नै सामान आयात गरेर नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउन थालेका छौं ।
अहिले आरएसके टे«ड कन्र्सनले कुन कुन स्पेयर पार्टस् आयात गरी बिक्री बितरण गरिरहेको छ ?
चीनबाट हामीले सबैभन्दा पहिला ‘एचवाइबी’ का स्पेयर पार्टस् आयात गरी सार्वजनिक ग¥यौं । यो चाँही सबैभन्दा ठूलो स्पेयर पार्टस् उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । किनभने आजको दिनमा चीनमा यो कम्पनीको विकल्पका रुपमा अरु कोही देखिएका छैनन् । यो कम्पनीले चीनमा पनि धेरै राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । त्यसपछि ‘एनएसटी स्पार्क प्लग’ को काम ग¥यौं । लगत्तै एचआवाईबी एमफए ब्राण्डलाई पनि नेपालमा भित्र्यायौं । त्यसपछि ब्रेक सु, टायर सिलेन्ट पनि ल्यायौं । शुरुका दिनमा हामीले बेयरिङ ल्याएका हौं । त्यसपछि प्रत्येक बर्ष एक–एक वटा नयाँ उत्पादन ल्याएर बजारमा उपलब्ध गराउन थालेका हौं । गुणस्तर राम्रो भएका कारण बजारले धेरै राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । जसकारण व्यापार बिस्तार गरेर अघि बढ्न हामीलाई थप हौसला मिलेको छ ।
बजारमा बिक्रेता र उपभोक्ताको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
हामी प्रत्यक्ष उपभोक्तासम्म पुगेर प्रतिक्रिया लिन त पाएका छैनौं तर उहाँहरुको सुझाव संकलन गर्ने र सोही अनुसार कारोबारलाई अघि बढाउने योजना बनाइरहेका छौं । बिक्रेताहरुले भने धेरै राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । चिनियाँ उत्पादन भनिएपनि गुणस्तरमा कुनै कमी नरहेको कुरा बिक्रेताहरुले सुनाउने गरेका छन् । कुनै पनि ओइएम उत्पादनको तुलनामा हामीले आयात गरेका स्पेयर पार्ट्सको गुणस्तर कमजोर छैन भन्ने कुरा हामीले बजारलाई परिचित गराइरहेका छौं । त्यसैले निर्धक्क प्रयोग गर्न हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौं ।
कुनै पनि मेकानिक्सले अहिलेसम्म हामीले बजारमा उपलब्ध गराएको स्पेयर पार्टस्बारे गुनासो गरेका छैनन् । चिनियाँ कम्पनीले उत्पादनका दौरान गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता गर्दैन । हामीले पनि आयात गर्दा गुणस्तर चाँही धेरै राम्रो चाहिन्छ भनेर चिनियाँ उत्पादक कम्पनीलाई भन्ने गरेका छौं । हामीले ब्याट्री, ब्रेक सुलगायत आयात गरी बिक्री गर्दा मूल्यका हिसाबले वा गुणस्तरका हिसाबले कुनै गुनासो सुन्नु परेको छैन । अहिले बजारमा हाम्रो कारोबार पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
नेपाली बजारमा चिनियाँ उत्पादन भन्ने बित्तिकै कमजोर गुणस्तरको सामान भन्ने छाप छ । तसर्थ शुरुका दिनमा सामान आयात गर्दा त चुनौती खेप्नुप¥यो होला नी ?
निश्चय पनि, शुरुका दिनमा धेरै चुनौतीको सामाना गर्नुपरेको थियो । मानिसले बजारमा देख्ने बित्तिकै चिनियाँ उत्पादन कस्तो होला र ? गुणस्तर कस्तो होला ? भनेर अविश्वास गर्दथे । हामीले चाँही हिम्मत नहारी अगाडी बढिरह्यौं । किनभने चीनिया उत्पादक कम्पनीले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरेको कुरामा हामी ढुक्क थियौं । चीनियाँ उत्पादक कम्पनी बहुराष्ट्रिय हो, जसले नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर आफ्ना सामान निर्यात गर्दै आएको छ । त्यस्तो कम्पनीको सामान ल्याएर बिक्री गर्न हामीलाई कुनै दुविधा भएको छैन । अर्कातिर प्रतिस्पर्धी बजार मूल्य राख्न पाउँदा हामीलाई कारोबार गर्न थप सहज भएको छ ।
शुरुका दिनमा नेपालबाट चीन गएर त्यहाँको कम्पनीहरुको सामान नेपालमा आयात गर्ने जानकारी दिदा उनीहरु खुसी भए । हामीलाई पनि उनीहरुले गुणस्तरीय सामानका बारेमा जानकारी दिए, त्यसबाट हामीपनि ढुक्क भयौं । उनीहरुले कारोबार गर्दै अघि बढ्नुस्, उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भएकाले भविष्य धेरै राम्रो छ भन्ने कुरा चिनियाँ कम्पनीबाट भरोसा प्राप्त भयो । हतार गर्नुपर्दैन, बिस्तारै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ कम्पनीको भनाई अहिले म सम्झिरहेको छु । किनभने अहिले त्यहीं कुरा भइरहेको छ । हामीले बिस्तारै बजारमा राम्रो छाप राख्दै कारोबार बढाउन सफल भइरहेका छौं । अहिलेको अवस्थामा पूर्व मेचीदेखीपश्चिम महाकालीसम्म राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं ।
आगामी बर्षका लागि के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
अहिले जुन कम्पनीबाट सामन आयात गरिरहेका छौं, सोही कम्पनीसँग मिलेर भविष्यमा नेपालमै स्पेयर पार्टस्को उत्पादन थाल्ने योजना बनाइरहेका छौं । अहिलेदेखी नै चिनियाँ कम्पनसँग यहीं सोच राखेर कारोबार गरिरहेका छौं । नेपालको बजारमा जुन दिन हाम्रो स्पेयर पार्टस्को बलियो कारोबार हुन थाल्छ र उत्पादन कारखाना वा एसेम्ब्लिङ प्लान्ट लगाउन सकिने अवस्था बन्छ, त्यो बेला छलफल अघि बढाउने चिनियाँ कम्पनीले बताइरहेको छ ।
चिनियाँ उत्पादन भनेर प्रयोग गर्न खासै रुची नदिने आम उपभोक्तालाई तपाईको के सन्देश छ ?
सबै उपभोक्ताको आ–आफ्नो रुची हुन्छ । कुनै पनि उत्पादनको बिस्तार एक–अर्काको सम्पर्कपछि हुने गर्छ । त्यसैले एक पटक हामीले ल्याएको सामान प्रयोग गरेर हेर्नका लागि म चिनियाँ सामानप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने उपभोक्तालाई आग्रह गर्छु । अहिलेसम्म प्रयोग गर्ने सबै उपभोक्ताले राम्रो गुणस्तरको भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका कारण अरु उपभोक्ताले पनि राम्रै मान्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।